ရန်ကုန် – Nyang Media
ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်း ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ သတင်းအမှား ပျံ့
Fact Checkဇန်နဝါရီ 29, 2021
ရန်ကုန် - မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါပြီ။ နေပြည်တော် သို့ အဝင်လက်မခံတော့ ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကို သီရိ အမည်ရ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်က ဇန်နဝါရီ (၂၉ ) ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။သည်နေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ web...
Fact Checkဇန်နဝါရီ 26, 2021
ငြမ်း /ဒေသခံများ နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင် ကျနော်တို့လည်း ဝိုင်းပြီးတောင်းပန်နေတာပဲ အချိန်ကြာပြီ။ ရွာဘက်က မခံမရပ်နိုင်လို့ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအထိ လာပြီး တင်ပြတာ။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ... အမှုန်နှင့်အနံ့ဆိုးများထွက်နေမှုကြောင့် ဒေသခံလူမှုဘဝများကို ထိခိုက်နေ၍ စက်ရုံပိတ်ပေးဖို့အထိတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေသော...
ရန်ကုန် Lockdown သတင်း ၊ သမ္မတရုံးရှင်း
Fact Checkအောက်တိုဘာ 04, 2020
ရန်ကုန်တိုင်း ကို Lockdown လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွေမှာပျံ့နေပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းကို လော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်မယ် နှစ်ပတ်စာလောက် ပစ္စည်းတွေ ဝယ်ထားပါဆိုတဲ့ နှိုးဆော်မှုတွေကို တွေ့နေရတယ်လို့ လည်း ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူ တစ်ဦးက သူ့ရဲ့ စာမျက်နှာမှာ အောက်တိုဘာလ(၃)ရက်နေ့ က...
QR Pass ရယူရန်မလိုသည့် လုပ်ငန်းများ ကြေညာချက် အတု
Fact Checkစက်တင်ဘာ 29, 2020
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Stay at Home) ကာလအတွင်း QR Pass ရယူရန်မလိုတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကို ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် (UMFCCI ) က ၂၀၂၀၊စက်တင်ဘာလ၊၂၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ခဲ့ပါတယ်။ အခုပြောပြလိုတာကတော့...
၂၄ ရက်နေ့ Lockdown လား၊ စားစရာတွေ ဝယ်ထားရမလား စိုးရိမ်နေတဲ့ သတင်းအမှား
Fact Checkစက်တင်ဘာ 22, 2020
စက်တင်ဘာ (၂၄) ရက်နေ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူကြား ပျံ့နေတဲ့ သတင်းအမှားတစ်ပုဒ် အကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်။ သည်သတင်းအမှား ဟာ စိုးရိမ်မှု တစ်ဝက်၊စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု တစ်ဝက်နဲ့ ပြည်သူများကြားမှာ သို့လော၊သို့လောနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၄...
ရန်ကုန်ကို စနေနေ့မှာ Lockdown ချမယ်ဆိုတာ သတင်းအမှားသာဖြစ်
Fact Checkစက်တင်ဘာ 17, 2020
ရန်ကုန်ကို Lockdown ချမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ သည် သတင်းဟာ မြို့နယ်အလိုက် ဖွဲ့ထားတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ဂရုတွေမှာ လည်း ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်း နေကြတာတွေ့ရတဲ့အပြင် ရပ်ကွက်တွေ၊လမ်းတွေမှာလည်း သည် အကြောင်းအရာနဲ့...
Fact Checkဇွန် 11, 2020
worldlifestyle နိုင်ငံသာ အဘက်ဘက် က ချွတ်ခြုံကျလာတာဗျ၊ အုပ်ချုပ်သူတွေ ကတော့ တစ်ယောက်မကျန် ချမ်းသာသွားတဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ ... ဝဿန်ကာလမိုးဦးကျပြီဆိုတာနဲ့ မောင်မှတ်တို့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးလဲ မိုးရေတက်ရေတဖွေးဖွေး ဖြစ်တော့တာပဲ။ မိုးရာသီကလည်း သူနဲ့အတူ ယင်ကောင်တွေ၊ ခြင်တွေ၊...
Fact Checkမေ 20, 2020
ငြမ်း / ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းတစ်ခုတွင်တပ်ဆင်ပေးထားသည့် လက်ဆေးရည်ပုလင်း ခရီးသည်ယာဉ်ပေါ်တွင်တွေ့ရသည့် လက်ဆေးရည်။ ခရီးသည်အနည်းစုလောက်သာ အဆိုပါ လက်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ယာဉ်ပေါ်သို့တက်ချိန်တွင် လက်ဆွဲအိတ် သို့မဟုတ် ထီး ကိုင်ဆောင်လာခြင်းကြောင့် လက်ဆေးရည် အသုံးပြုရန် ခက်ခဲနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပြီး...
ကိုဗစ် အများဆုံးတွေ့သည် ရန်ကုန် အသွားအလာများ၊ စည်းကမ်း လိုက်နာရန် ဒေါ်စုသတိပေး
Fact Checkမေ 06, 2020
Global Time / တရုတ်နိုင်ငံ၊COVID -19 စစ်ဆေးမှု လုပ်ဆောင်ရန် နှာခေါင်းတို့ဖတ် ယူစဉ် COVID -19 ကူးစက်မှုရောဂါ အများဆုံး တွေ့ထားသည့် ရန်ကုန်မြို့တွင်အသွားအလာများ လာသည်ဟု သိရပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန်...